Fialam-boly mitondra fifaliana
"Dia hifaly izay rehetra mialoka Aminao, hihoby mandrakariva izy, koa miarova azy Hianao; ka dia ho ravoravo Aminao izay tia ny anaranao." - Sal. 5:11.
Ny fahavalon'ny fahamarinana dia efa nanomana karazam-pahafinaretana maro samy hafa ho an'ny tanora eo amin'ny karazam-piainana rehetra. Tsy eny amin'ny tanan-dehibe maresaka ihany no anehoany izany fa eny amin'ny faritra rehetra onenan'ny olombelona. Tian' i Satana ny manao ny tanora ho isan'ny miaramilany. Fantatr'io devoly ratsy fanahy io tsara ny fitaovana eo am-pelatanany ka efa nampiasa ny fahendreny sandoka izy eo amin'ny famolavolana fomba amam-panao sy fahafinaretana ho an'ny tanora. Hanaisotra ny fitiavan'izy ireo an'i Kristy izany. Efa hatramin'izay ireo lalao maro samy hafa eo amin'ny fiaraha-monina no naharendrika olona an'arivony maro dia maro tokoa. Raha tsy nisy anefa ireo karazan-dalao mahasarika ireo, dia ho zaza mpankato ireo sady nanaja ny ray aman-dreniny, nahitsy sy nadio ary mendrika teo amin'ny raharaha fanaony sy teo amin'ny toetrany. — YI, 05 Janoary 1887.
Raha tsy maintsy nankeny amin'ity toerana nisy ireo nilomano tao anatin'ny lalaony sy ny fahafinaretany tsinontsinona i Kristy, moa ve ho ren'izy ireo ny feony milanto mitso-drano ka manao hoe: "Fiadanana ho amin'ity trano ity." Amin'ny fomba ahoana no hifalian'ny Mpamonjy izao tontolo izao amin'ireo fanehoana fifaliana feno hadalana ireo? — RH, 13 Oktobra 1874.
Tsy mety afa-po na oviana na oviana ny fireharehana sy ny fanirian-daza. Ireo izay tena hendry kosa anefa dia hahita fahafinaretana lehibe sady manandratra avy amin'ireo loharanom-pifaliana efa napetrak'Andriamanitra ho sahaza ny rehetra. — PP, 50.
Tsy hoe omena fahafahana fotsiny hiala sasatra ny Kristianina fa tsy maintsy mandray andraikitra hampiala sasatra ny sainy ary hampahatanjaka ny rantsam-batany amin'ny fialan-tsasatra madio, mba hampiasany ny herim-batany sy ny herin-tsainy rehetra ka hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra takina amin'izy ireo dia tsy fialan-tsasatra mampitotongana velively. Aoka hikendry mandrakariva ny mahasoa sy manandratra izay rehetra mandray anjara amin'ny fanatanterahana izany andraikitry ny fiainana kristianina izany. Manapariaka ny fifaliana sy ny hery miasa mangina, manandratra ny fivavahan'i Kristy. — HT, 1.